musha Europe vatambi Alvaro Morte Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Iyo Biology yaAlvaro Morte inoratidza Chokwadi pane yake yehucheche Nyaya, Hupenyu hwepakutanga, Vabereki, Mhuri, Mudzimai, Vana, Mararamiro, Net Kukosha uye Hupenyu hwePamoyo. Isu tinokupa iwe kuongorora kwakazara kwezviitiko zvese zvinozivikanwa kutanga kubva pamazuva ake ehudiki (ona pazasi) kusvika paakazove Akakurumbira.
Hwepakutanga Hupenyu uye Kukwira kweMari Heist Muzvinafundo AKA Alvaro Morte. 📷: pinterest, IG, Uye fandom
Ehe, iwe neni tinoziva ndiye anotungamira iyo Netflix's Hit Film - Mari Heist AKA Lacasa De Papel. Nekudaro, vashoma chete vateveri vakafunga kuverenga Iyo Muzvinafundo AKA Alvaro Morte's Biography, inova inoyevedza. Zvino, pasina imwezve ado, ngatitangei.
Alvaro Morte Nyaya Yechecheche Nyaya:
Kutanga, Mari Heist's Purofesa zita chairo ndiAlvaro Antonio García Morte. Mutambi wechiSpanish, mugadziri, uye director akazvarwa musi we23rd waKukadzi, 1975 kuvabereki veSpanish, muguta reAlgeciras, Maodzanyemba eSpain.
Little Alvaro akanakidzwa mamwe akanaka mazuva ekutanga paakakura achikura uye kudiwa. Sezvinoonekwa pazasi, vese baba na baba vake vaiziva zvakavanzika zvekurera mwana vanofara.
Mudiki uye akanaka Alvaro anonyemwerera kune kamera. Aive mwana anofara kudaro. 📷: IG
Iye Spaniard mudiki akakura aine ruzivo rwekunaka kuti guta rake (Algeciras) ndiyo yekupedzisira gedhi pakati peEurope ne Africa. Maererano neshoko repamhepo, chinhambwe chemakumi matanhatu nemakumi mashanu neshanu chinopatsanura kwakakurira Alvaro Morte uye Africa, chaizvo Mororos.
Iwedzere-yakadzama pikicha kune iyo Iyo Iyo Heist Muzvinafundo akakurira. 📷: google mepu
Alvaro Morte Mhuri Dzinotangira Neshure:
Kubva waona yeNetflix's Money Heist Series, pamwe wakabvunza nezve nyika yePurofesa kwaakabva. Tichitarisa kubva kwaakaberekerwa, mhuri yaAlvaro Morte vane nhoroondo yavo kubva mudunhu reAndalusia, muPeninsular Spain. Iyi chikamu cheSpain, kusiyana nematunhu akaita seCatalonia, Valencia neGalicia inotaura mutauro weSpanish.
MuSpanish (akafananidzirwa pazasi) akakurira mune ingangodaro iri yepakati-yemhuri mhuri kumashure. Pakutanga, vese vabereki vaAlvaro Morte vakagara muAlgeciras, iro guta rechiteshi riri kumaodzanyemba kweSpain.
Alvaro Morte akakurira muAlgeciras, iyo Spanish Port City. Vabereki vake vanogona kunge vakashanda nePort yeguta. : Safety4Sea
Zvinoenderana nekutsvaga nezve iri rakanaka guta rechiteshi, zvinoita sekunge vazhinji vevagari vayo vane basa rinowana nePort. Nekudaro, amai nababa vaAlvaro Morte, avo vaiwana mari yepakati, vanogona zvakare kuve nemabasa avo akabatana nePort.
Dzidzo yaAlvaro Morte:
Mari Heist Muzvinafundo anga ari mwana akangwara kubva pamazuva ake ehudiki. Aive akanyanya wemwana anoyevedza, mumwe airatidza maitiro mazhinji emitambo. Kuona hunhu uhu, vabereki vaAlvaro Morte vakasarudza kunyoresa mwana wavo kuCórdoba Chikoro cheDramatic Art.
High Chikoro Mazuva:
Alvaro Morte akaenderera mberi nedzidzo yake yekusekondari kuCórdoba, guta riri kumaodzanyemba kwedunhu reSpain reAndalusia. Mushure mekufunga pfungwa dzekuita, muSpanish akaenderera mberi kuenda kuECAM, iyo Madrid Firimu Chikoro. Kumufaro wenhengo dzemhuri dzaAlvaro Morte, mutambi weramangwana haana kungoisa bhegi rakapedza kudzidza, asi kudzidza kuyunivhesiti zvakare
Dzidzo yaAlvaro Morte- MuSpanish akapinda Chikoro cheDrama Art kuCordoba, Spain. 📷: ESAD Cordoba.
Mushure mekupedza chikoro chesekondari, ramangwana Money Heist mastermind akawana chikoro chekufunda ku University of Tampere. Inoratidzwa pazasi, iyi yunivhesiti yeruzhinji iri muTampere, Finland. Ndichiri paYunivhesiti, iye muSpaniard akasarudzika nehunyanzvi maturikiri uye edanho maneja. Iye akatanga ave mudzidzi, uye gare gare akazova muongorori.
VERENGA Javier Bardem Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Alvaro Morte akatanga ari mudzidzi uye akazova muongorori paTampere University, Finland. 📷: UTA.
Alvaro Morte Makore Ekutanga neKuita:
Chekutanga uye chekutanga, Protagonist akatanga rwendo rwekuva mutambi anobudirira nekutamba zvinotsigira munzvimbo dzinoverengeka dzeSpanish dzemuno terevhizheni. Firimu rekutanga raAlvaro Morte i "Los niños del jardí." uye yake yekutanga-akamboona TV Series "Hospital Central." Achienzanisa mabhaisikopo ake epakutanga, "Planta 25" yakave yekutanga fan yaanofarira. Zvino heino vhidhiyo yeiyo 2007 akateedzana naDaniyoPlay.
Pagore ra2007, zvese zvinoita sezvakanaka kune mutambi weSpanish. Sezvo Alvaro aifunga kuti zvinhu zvaifamba zvakanaka, zvishoma aiziva zvimwe zvinetso zvehutano zvave kuuya nenzira yake.
Alvaro Morte's Biography- Paakatambura Tumor:
Nzira yaAlvaro yekubudirira yanga isiri nyore. Waizviziva here?… Mutambi akatsungirira mamwe makore akaoma, kunyanya panguva yaakatambura bundu rakaipa pagumbo rake rerudyi, imwe nguva muna 2011. Achitaura nezvematambudziko ake ehutano, Morte akamboti;
Pakutanga ndakafunga kuti ndichafa, kuti gumbo rangu raizogurwa, asi hapana chakaitika. Zvisinei, mumamiriro ezvinhu anorwadza iwayo, ndakanga ndashuva kufa zvakadzikama.
Post Matambudziko Ehutano- Zviitiko mushure mekupona Kenza:
Alvaro Morte akadzokera mukuita mushure mekunge apora zvinoshamisa. Akagamuchira kupora kwake ne2012 Spanish Television akateedzana yakanzi "Bandolera".
Iye Spaniard akadzoka kuzoita mushure mekupora kwehutano pamwe neyekutanga TV Series, Bandolera. 📷: mizona TV
Alvaro Morte Biography - Kumuka kune Mukurumbira Nhau:
Iyo mastermind yeMoney Heist inoteedzera yakatsungirira yakakwana kumirira mukana wekurova pasi rose stardom. Mushure mekuita zvakatenderedza mafupi matanhatu uye mashanu eTV tiki kubva muna5, nguva iyoyo yaakamirira pakupedzisira yakasvika.
Nyaya yekubudirira yaAlvaro yakatanga apo Plex Pina (Money Heist Series future director) akamusainira kuti atore chinhanho mumutambo wemitambo yemitambo. Ehe, angangoita wese munhu, kusanganisira iwe anoyemura Mwaka 1. Nekudaro, Mwaka 4 uyo weTrailer vhidhiyo inoonekwa pazasi, yakave BOMBSHELL!
Panguva yekunyora iyo Biography yeMari Heist Muzvinafundo - vlvaro Morte, mutambi uyu, pasina mubvunzo, akawana budiriro yepasi rose mushure mekuridza chinzvimbo chaSergio "El Profesor" muSpanish TV Series- Mari Heist.
Kutenda kune iyo Series, mutambi anozivikanwa kubvira 2019 akahwina mibairo mikuru uye vateveri vatanga kutsvaga mamwe emamwe mafirimu aAlvaro Morte. Vamwe vese, sezvavanotaura, inhoroondo.
Nezve Mukadzi waAlvaro Morte- Blanca Clemente:
Kubva mushure mekutarisa iyo Mari Heist Series, unofanirwa kunge wakazvibvunza iwe;
Ndiye Mari Heist Mufundisi Akaroora? kana Iye ane Musikana weVasikana?
Kuti utaure chokwadi, mutambi anoyevedza, uyo akafananidzwa negarwe Michael Scoffield AKA Wentworth Miller yatotorwa. Alvaro Morte, panguva yekunyora, anofara akaroora naBlanca Clemente. Tarisa uone yakanaka pikicha yeMukadzi Heist Purofesa mudzimai chaiye.
Sangana Nemukadzi waAlvaro Morte- Blanca Clemente. 📷: gossipfanpage
Mukadzi chaiye wePurofesa, Blanca Clemente, kungofanana nemurume wake, akazvarwawo pakati pemakumi manomwe. Blanca ane matarenda mazhinji. Iye anonyora, mutambi uye mugadziri uyo anoshanda muClassic kuita.
Alvaro Morte ane rombo rakanaka kuti akaroora Blanca, uyo anogovera chiratidzo chakafanana uye kuda sezvaanoita. Iye munhu anozvipira uyo hapana kana chaanoita kunze kwekutsigira pfungwa dzemurume wake kunyangwe iwe zvinoreva kuisa yake pakubata.
Panguva imwechete yekumisikidza Alvaro Morte's Biography, vese murume nemukadzi vabatanidziri vekambani yeTheatre hunyanzvi inonzi Iyo 300 Pistols. Kubva kune vakaroorana vachangoburwa, zvinoita sekunge vanonakidzwa nehukama hwakanaka, uhwo hunokomborerwa nevana.
Alvaro Morte uye Mukadzi, Blanca Clemente anogovana chibvumirano chakajairika. 📷: pinkvilla
Ngatisanganei naAlvaro Morte Vana:
Muchato pakati peSpanish nemukadzi wake, Blanca Clemente, unokomborerwa nevana. Mukadzi waAlvaro Morte ndiye amai vemapatya asina kufanana- mukomana anonzi Leon nemusikana anonzi Julieta.
Sezvinoonekwa pazasi, vana Mari Heist Muzvinafundo havafi vakarega kufarira baba vavo avo vanoda kushandisa nguva yakanaka navo.
Alvaro Morte ari kufambidzana naTwin wake, Leon naJulieta uye zviso zvavo zvakatsiviwa neEmoji. 📷: Pinkvilla
Tichifunga kubva pamufananidzo wevana vaAlvaro Morte pazasi, unofanira kunge wakabvunza kuti nei zviso zvavo zvakafukidzwa. Mutambi wechiSpanish anochida nenzira iyoyo, zvichireva kuti zero pachena kumwanakomana nemwanasikana.
Hupenyu Hwega hwaAlvaro Morte:
Mushure mekutarisa iyo Mari Heist, ndakabheja, ungangoda kuziva zvakawanda nezve hupenyu hwePurofesa. Kure kure nehunhu hwaaive nahwo muTV Series, Alvaro mumwe munhu zvakare ane huchenjeri muhupenyu chaihwo.
Alvaro Morte anotaura mitauro miviri (anotaura Chirungu naamai mutauro- Spanish). Iyewo munhu anopa uye ane hushamwari munhu ane hutsinye hwakawanda uye akataura manzwiro emumoyo. Mutambi uyu ane hukama hwepedyo nevanenge vese vamwe vake veMoney Heist.
Hupenyu hwaAlvaro Morte Hwega- Mutambi wechiSpanish anenge akangwara sezvaari muhupenyu chaihwo. 📷: zimbio
Alvaro Morte's Hobbies:
Kunze kwekutamba, Money Heist Profesa inonamatira kumimhanzi sezvo achida kutamba gitare pamwe nemwanakomana wake, Leon nemwanasikana, Julieta aripo. Kungofanana nababa vake, Leon Morte anodawo zvemimhanzi.
Imwe yeAlvaro Morte's Hobbies iri kuridza Guitar padivi nemwanakomana wake, Leon & mwanasikana, Julieta varipo. 📷: 6ixtenorix
Alvaro Morte Mararamiro:
Alvaro akajairwa chaizvo maPisces asingape mari zvakanyanya kufunga. MuSpanish anosarudza kushandisa mari yaanowana achitora nzendo kunzvimbo dzakanaka dzenzizi. Peek mu Instagram rake rinoburitsa rumwe ruzivo nezve mararamiro ake ekuzvininipisa zvakanyanya.
Alvaro Morte Lifestyle: Haape mari zvakanyanya kufunga, uye anoda rwizi parutivi zororo. 📷: superstarbio
Alvaro Morte's Net yakakosha:
Nebasa rake rose rakaoma uye kuzvipira kushanda, Protagonist anonzi "El Professor" anofungidzirwa kuve nemambure akakosha anodarika $ 2 miriyoni kubva muna Chivabvu 2020. Anonyanya kupa hupfumi hwaAlvaro Morte anobva kubasa rake rekuita uyezve neake tsigiro yemhando dzinodiwa dzeAudi España uye Dsquared2.
Alvaro Morte Hupenyu hwemhuri:
Iyo nzira yekuenda kune stardom ingadai isina kuve inodyiwa sezvayakaita pasina rubatsiro rwemitezo yemhuri yakamira naye, kunyanya mukati memakore iwayo anovava nenyaya dzehutano. Muchikamu chino, tinokuunzira rumwe ruzivo nezvevabereki vaAlvaro Morte pamwe nenhengo dzemhuri yake.
Nezve Baba naAmai vaAlvaro Morte:
Peharbs iwe unotoziva iwe. Imwe yehunhu hwakanakisa hwaAlvaro kugona kuchengetedza hupenyu hwepachivande. Chokwadi ndechekuti, Alvaro akachinjisa izvi zvakavanzika muhupenyu chaihwo, achizviita kukanganisa imba yake kunze kwemukadzi wake. Ruzivo nezvevabereki vaAlvaro Morte parizvino zvakavanzika.
About Alvaro Morte Vanababa uye hama:
Kungofanana nevabereki vake, mutambi wechiSpanish akave nechokwadi chekuziva nezve hama dzake dzinosara muchivande. Nekudaro, nhengo yega yega yemhuri, kunze kwaBlanca Clemente, vese vakaita kuyedza kusaburitsa mazita avo.
Alvaro Morte Chokwadi OR… Chokwadi pamusoro peMari Heist Muzvinafundo:
Kuputira yedu Alvaro Morte's Biography. Hezvino zvishoma-zvinozivikanwa chokwadi nezveSpanish mutambi.
Chokwadi # 1 - Yake Yemagariro Media Akaundi Akabuda kunze Kwechikamu Mushure MeMari Heist
Alvaro Morte anga asiri iye anozivikanwa pamberi pemari Heist Series. Nekudaro, achangopedza kuzviita, nhoroondo yake ye Instagram yakabuda kunze kwechikamu. Sezvo muna Chivabvu 2020, Alvaro ane 10.6 mamirioni IG vateveri uye Twitter account ye410k zvichiteerana.
Iyo yeNetflix Money Heist nyeredzi ine yakakura yemagariro midhiya fan fan.
Chokwadi # 2 - Nezve ake Theatre Kambani:
Alvaro, pamwe nemukadzi wake Blanca mugore ra2012, vakagadzira kambani yeTheatre yainzi 300 pistolas zvinoreva 300 pistols muChirungu. Iyi bhaisikopo yesangano ine iyo yega chinangwa chekuita kuti nyika idzokorore zvakare Classical Movie, zvakare, kune iyo pfungwa yekupa kudzoka munharaunda.
The Spaniard nemukadzi wake, Blanca akabatana Theatre Kambani- 300 Pistolas. 📷: 300 Pistolas Webhusaiti
Chokwadi # 3 - Iye purofesa muHupenyu Hwechokwadi:
Zvinoenderana nerunyerekupe, Alvaro Morte inyanzvi yemubatsiri anoita hurukuro, pamwe achingori chikamu, paTampere University, Finland. Pane mishumo anodzidzisa Stage Management uye Literature paFinnish University.
Chokwadi # 4 - Alvaro Morte's Tattoos ndeyevaFani chete:
Iyo Mari Heist protagonist haina tattoo-isina. Nekudaro, kune huwandu huri kuwedzera hwevateveri veMari Hist vanosarudza kuve nemufananidzo waAlvaro wakatemwa nyora pamiviri yavo. Heino imwe pamusoro pemumwe munhu ibvi rerudyi.
MuSpanish mutambi Mufananidzo wakatemwa pane fan fan. 📷: twitter
Tinokutendai nekuverenga yedu nyaya yeMari Heist Muzvinafundo. Vagadziri vedu vakatarisira kunyatsojeka uye kurongeka vachinyora zvakanyorwa paAlvaro Morte Biography uye Nyaya Yevechidiki.
Ndokumbira utitane nesu kana iwe ukaona chimwe chinhu chaunonzwa chisingatarise zvakanaka pachinyorwa chino pamusoro paAlvaro. Zvikasadaro, tiudze iwe zvaunofunga nezve iyo Money Heist nyeredzi. Semuenzaniso, purofesa ane njere kupfuura Michael Scoffield AKA Wentworth Miller?
Zita rizere Alvaro Antonio García Morte
Nickname El Purofesa
Bhavhdhe 23 yaFebruary 1975
Children Mapatya (Leon naJulieta)
dzidzo Córdoba Chikoro cheDrama Art. (Dzidzo Yekutanga) uye Yunivhesiti yeTampere, Finland (Dzidzo yepamusoro).
Inokosha kukosha $ Miriyoni 2
urefu 6ft 0In, 183 cm
uremu 75 kg, 165 lbs
basa Muongorori, Muridzi weFirimu uye Director